Ogaden News Agency (ONA) – Qaramada Midoobey oo Ka Fikiraysa Nabad Ilaaliyeyaal Loo Diro Burundi.
Qaramada Midoobey oo Ka Fikiraysa Nabad Ilaaliyeyaal Loo Diro Burundi.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay ineey ka fikirayaan ineey ciidamo nabad ilaalin ah u diraan dalka xaaladiisu kacsan tahay ee Burundi. Ban Ki-moon ayaa sheegay maalintii Isniinta in ciidamo nabad ilaalin ah ay yihiin xalka keliya, si loo bilaabo wada hadal ka dhaca dalkaas.
Rabshadaha dalka Burundi ayaa ka dhashey kadib marki Madaxweynaha dalkaas Pierre Nkurunziza bishii Abril sheegay in uu markii saddexaad xilka isu soo taagayo, taasoo dastuurku aanu u ogoleyn. Pierre Nkurunziza ayaa sheegay xiligii u horeysey ee uu Madaxweyne noqdo aan la xisaabineyn maadaama aan shacabku soo dooran.
Bishii 7aad ayaa Pierre Nkurunziza ku guuleystey doorasho rabshado wadata, taasoo aysan ka qayb qaadan mucaaradku. Kadib waxaa dalka ka bilowdey dil iyo jirdil loo goysanayo mucaaradka.
Ugu yaraan 240 qof ayaa ku dhimatey rabshadaha dib uga bilowdey dalkaas, waxaana ay u badnaayeen dad la khaarijiyey oo tageersanaa mucaaradka. Qiyaastii 200 0000 kun oo qof ayaa dalka isaga qaxay.
Dalka Burundi waxa uu xornimada ka qaatey dalka Biljimka sanadkii 1961, waxaana dalkaasi soo marey dagaalo sokeeyo oo boqolaal kun oo qof ku geeriyoodeen, waxaana dagaaladaas lasoo afjarey sanadkii 2005.
Waxaa xusid mudan in dalka Burundi ee la doonayo in loo diro nabad ilaaliyaasha, ay Soomaaliya ka joogaan ciidamo nabad ilaaliyaal ah!.